Mareykanka oo dib u dhigay maxkamadaynta burcadbadeed Soomaali ah. – Radio Daljir
Mareykanka oo dib u dhigay maxkamadaynta burcadbadeed Soomaali ah.
Washington,Dec,17 -Maxkamad kutaala magaalada Norflok ee dalka Mareykanka ayaa dib u dhigtay xukun la doonayay in lagu rido laba nin oo burcadbadeed Soomaaliyeed ah,oo loo haysto inay dileen afar muwaadin oo u dhashay dalka Mareykanka bishii February ee horaantii sanadkan.
Saciid Cabdi Fooleey iyo Cabdi Jaamac Aqid oo qayb ka ahaa 11 qof oo Soomaali ah oo lagu soo eedeeyey inay dileen la haystayaal Mareykan ah oo ay ku qafaasheen xeebaha Soomaaliya ayaa la sheegay xukunkooda oo lagu waday inuu dhaco maalintii Jimcada ee shalay in dib loo dhigay,mana jirto waqti rasmi ah oo loo go’aamiyay xukunkooda inuu dhaco.
Labada nin ee ku’eedaysan dambiyada burcadbadeednimo iyo dilka muwaadiniinta Mareykanka ayaa ah burcadbadeeda ugu dambeeya ee xiligan xukun sugayaal ah dalka Mareykanka,waxaana horay maxkamadda Norflok ay xukun xabsi daa’in ah ku riday 9 ka mid ahaa ragii burcadbadeedka ahaa ee ku wehlisay afduubka iyo dilka loo gaystay afarta qof ee Mareykanka u dhashay.